आयातित संक्रमणलाई निस्तेज गर्न सिमानाको व्यवस्थापन गर्नुपछ «
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले अहिले प्रकोपको मुखमा पुग्नु भनेको अपेक्षित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने,‘हामीले पटक–पटक, बारम्बार–बारम्बार यस्तो हुनसक्ने सम्भावनाहरुको बारेमा इंगित गरिरहेका थियौं । अहिले हामी जुन चरणबाट गुज्रिरहेका छौं, यो हाम्रो लागि एकदम छक्क मान्नुपर्ने, हामीले सोचेभन्दा बाहिरको स्थिति पक्कै पनि होईन् । मुख्य कुरा, यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराको अनुमान हुँदाहुँदैपनि हामीले कति तयारी गर्यौं ? अहिले हामी चाहीँ अहिलेको प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न के कस्ता नीतिहरु बनाईरहेका छौं, यो एकदमै महत्वपूर्ण पाटो हो ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका प्रमुख कन्सलटेन्ट सरुवारोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेकाले अब भयाबह स्थिती आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । संक्रमणले भुसको आगोको रुप लिइसकेको भन्दै उनले चैत महिनामा मात्रै ४६ जना आइसियुमा भर्ना भएको जानकारी दिए ।
धेरैजसो अस्पतालमा संक्रमितलाई उपचार गराउने भौतिक पूर्वाधार अभाव भएको भन्दै उनले भेन्टिलेटर नै पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी पछिल्लो समय संक्रमित भएकाहरु निको हुनै नसकेको पनि बास्तोलाले बताए ।
यस्तो डरलाग्दो अवस्था सृजना हुँदा पनि सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेर ठूलो गल्ति गरिरहेको बास्तोलाले बताए । युके भेरियन्ट नेपालमा आइसकेको अवस्थामा लापरबाही गर्नुले अब ठूलो क्षति हुन सक्ने चेतावनी उनले दिए । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार र जनता दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
डा. बास्तोलाले अहिले युवा पुस्ताहरुमा बढि संक्रमण लागेको तथ्यांक सुनाए । उनले भने,‘हामी सरकारलाई मात्रै दोष दिईरहेका छौं । तर, हामीले जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड तोडिसकेका छौं । हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेनौं भने भोलिका दिनमा गम्भीर चूनौति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले अनावश्यक कामबिना भीडभाड नगर्नसमेत आम नागरिकमा अपिल गरेका छन् । उनले कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका तत्काल परीक्षण गराउन र आइसोलेशनमा बस्नसमेत आग्रह गरे ।
तर यो भयावह स्थितीमा पनि सर्वसाधारण सचेत हुन नसकेको भन्दै डा. बास्तोलाले कडा चेतावनी दिएका छन् । कतिपय विद्यार्थीहरुसमेत संक्रमित भइरहको तर अभिभावकले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।
अहिले नै रोकथामका लागि व्यवस्थ्ति उपाय अपनाउन नसके अबको ५ महिनाभित्रमा उपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्था सृजना हुने बास्तोलाले बताए । काम नभएकाहरु सेल्फ लकडाउनको शैलीमा घरमै बस्न बास्तोलाले सुझाब दिएका छन् ।
अहिलेको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भेला, सभा सम्मेलन, पर्व आदिका नाममा भिडभाड गर्ने काम तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बास्तोलाको भनाई छ । उनले आजको दिनदेखि नै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे । उनले भने,‘बिना कारण घरबाट ननिस्कियौं । कोभिडको खोप लगाएकाहरुलाई पनि कोरोना देखिन सक्छ ।’
उनले आफूहरुले विद्यालय बन्द गर्न भनेर नभनेको पनि स्पष्ट पारे । तर, केही समय बन्द गरेर अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालन गर्न भनिएको पनि उनले जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा तथा बरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दिक्षितले नेपाल कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्थामा पुगिसकेकोले तत्काल सिमा नाका बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘अहिले स्थिति एकदमै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ, अस्पतालमा अब आईसियु बेड छैनन्, अक्सिजन छैन । भेन्टिलेटर त छँदै छैन् । अहिले जटिल अवस्थामा पुगेकोले हामीले के गर्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्नुपर्छ । सिमा नाकाहरु तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । तत्काल कडाईका साथ सिमा नाका बन्द गर्नुपर्छ । र, सिमाको व्यवस्थापनमा अब नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्छ । त्यहाँ सिभिलियनले अब नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । काठमाडौं उपत्यकाको नाका पनि तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । कडाई गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिले आफूहरुले (नागरिक) ले के गर्ने र सरकारले के गर्ने ? भन्नेबारे भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्ने पनि सुनाए । उनले भने,‘अहिले कोरोनाको यस्तो जोखिम बढेको छ । तर, हामी जनताले असाध्यै यसलाई बेवास्ता गरेका छौं । जुन देशमा जनताले बेवास्ता गरेका छन्, त्यहाँ कोरोनाको अवस्था भयावह छ, तर जुन देशमा जनता अनुशासित भएका छन्, ती देशमा कोरोना नियन्त्रण भएको छ । त्यसैले हामी नेपालीहरुले पनि लापरवाही गर्नुहुँदैन् ।’
उनले नेपालका राजनीतिक दल र यसका नेताहरुलाई अहिले कोरोनाको जोखिमको समयमा भीडभाड गर्न नहुने कुरा थाहा हुँदाहुँदैपनि जनताको वास्ता नगरी खाली आफ्नो स्वार्थको लागि अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘नेताहरुले अहिले तिमी जनता मरे मर, तर हामीलाई माथि पुर्याईदेउ भन्ने मात्रै ध्यान छ ।’ उनले पब्लिक पनि अब एकदमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोपपनि पर्याप्त मात्रामा नभएको अवस्था सुनाए । उनले भने,‘भारतले पनि दिन सकेको छैन् । अरु देशले पनि दिन सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले अब जहाँबाट भएपनि किनेर ल्याउनुपर्छ । सबै जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै अन्तरविरोध छ, यो बेलामा उनीहरुबीच समन्वयकारी हुनुपर्दथ्यो । यो मिलाउने काम क्याविनेटको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल साझा निर्णय गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।’ उनले अब परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आईसियुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि भनाई राखे ।
डा. दिक्षितले अहिले जुन जुन विद्यालयमा संक्रमणको जोखिम छ, ती विद्यालयहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए । र, पठनपाठन भने वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले विज्ञहरुको सल्लाह र सुझावअनुसार विद्यालयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले अब कोरोनाको यो दोस्रो लहरलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरे । उनले अब जनता सेल्फ लकडाउनमा बस्नुपर्ने र अनुशासित हुनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।
पाँचथरमा एक जना कोरोना संक्रमितिको मृत्यु भएको छ ।पाँचथरको उत्तरी फालेलुङ गाउँपालिकाका कोरोना संक्रमितको मृत्यु
पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेत कोभिड–१९ सङ्क्रमणमुक्त भएसँगै जिल्लामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र विकासका
कोरोना संक्रमितको लागि अक्सिजन अभाव भइरहेको बेला बिगत एक हप्ता यता आईसियु र भेन्टिलेटरको सहयोगमा
महानगरले ३२ वटै वडामा खोप केन्द्र राख्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि सबै वडामा खोप केन्द्र तोक्ने भएको छ
उपप्रधानमन्त्री र अमेरिकी राजदूतबीच भेट
उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पारेका छन्
कोभिड–१९का कारण उत्पन्न अक्सिजन समस्यामा सघाउन अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई थप रु. ३२ करोड १७ लाख